Na progression nke nkà na ụzụ, ọtụtụ uzo ozo ka ochie akwụkwọ usoro nke-arụ otu ọrụ kpọmkwem e chepụta otu onye nke bụ Ndekọ edezi gị ọdịyo faịlụ. Oge ụfọdụ azụ, otu onye ga mkpa a studio melite na ọkachamara ngwaike ngwá, soundproof mgbidi na ihe bụghị iji nweta a top notch track na na kwa ga-nza na nza nke omume na ndidi. Ma ka ọ bụla ọzọ ubi, ubi nke music mmepụta / edezi nwekwara e nwee oké mgbanwe. Taa, anyị na-Aga a lee anya na n'elu 6 music track editọ dị ka anyị na otu otu anyị ga-enyocha atụmatụ ha igosipụta.
WavePad bụ ihe dị mfe iji ma a dị ike audio edezi ngwá ọrụ. Ma na-eji maka agwakọta ụfọdụ gafere ma ọ bụ nanị trimming ọdịyo faịlụ, WavePad na-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi ọkachamara àgwà mmepụta onye ọrụ e-enwe olileanya maka. The nnukwu ego nke Nkuzi dị online na kwa ngwa ngwa dị enyemaka na nkwado na-eme ka novice ọrụ na-eche welcome na-enyere ha aka inwe njikere dezie ha audios na a ọkachamara n'ụzọ na a nnọọ obere na-adịru nke oge. Ọ bụ dakọtara na Windows na Mac OS X.
Uru: Mfe na mfe iji interface. Na-enye dokwara ụtọ ahụmahụ maka ma beginners na ahụmahụ ọrụ.
Cons: Audio apụghị amịpụtara si video faịlụ. Rating: 5
2. Adobe nnyocha
Adobe nnyocha abịa juru n'ọnụ na a dịgasị iche iche nke mmetụta na-eme ka ọ na-nile na otu Digital Ọrụ Station. Ọ na-enye ike audio edezi ngwaọrụ dị ka n'out oge Ndekọ na-edezi multiple ọdịyo faịlụ. Ọ na-enye ohere onye ọrụ iji weghachi ochie audio data nke bụ oké ọrụ n'onwe ya ma n'otu oge bụ-enyere onye ọrụ kpomkwem edit waveforms iji nweta enwekwukwa results. Adobe nnyocha bụ dakọtara na Windows XP (SP 3) na Windows 7 (SP 1). Ọ na-akwado na Mac OS X.
Uru:-eme mkpọtụ iwepụ si ọdịyo faịlụ dị mfe.
Cons: Dị ka bụ ikpe na WavePad, Adobe nnyocha apụghị wepụ audio si video faịlụ kwa. Rating: 4.5
Ọ bụrụ na ị na-achọ a ezi uche audio edezi ngwá ọrụ na kenkwukorita interface, AVS Audio Editor bụ ngwá ọrụ gị. Ọ na atụmatụ ụfọdụ àgwà audio mmetụta (bụghị dị ọtụtụ dị ka Adobe nnyocha ezie na) tinyere too anyị ọdịyo ndekọ ike. AVS audio nchịkọta akụkọ anaghị akwado Mac OS X ma ọ bụ Linux. Ọ ugbu a na-agba naanị na usoro na Windows 7, 8, 2003, Vista na XP.
Uru: Ọ dịghị usoro maka audio mweghachi.
Cons: mfe ma dị mfe iji na a enyi na enyi interface. Rating: 4
Na mgbakwunye na nke isii ọhụrụ nzacha, nnukwu oge-ndinyanade mbịne na pitch-shifting ngwá ọrụ na ike idekọ ma dezie multiple ọdịyo faịlụ na oge eme ka Acoustica Digital Audio teepu oké ngwá ọrụ nwere. Ọ kọrọ, Otú ọ dị, na ya mkpọtụ mwepụ ike nke bụ nanị dị na adịchaghị version.
Uru: Mfe iji interface na bụla ngwá ọrụ n'ime ọrụ na-apụghị iru. Ọ bụ dakọtara na Windows OS naanị gụnyere Windows 7, 8, XP na Vista.
Cons: Audio mweghachi adịghị na Standard version. Rating: 3.5
The interface nwere ike iji obere upgradation ma Diamond Cut, na ya onwe ya bụ otu nnukwu ọdịyo ndekọ, edezi na mweghachi ngwá ọrụ na ike dị ka kewara a track n'ime abụọ na-asọkọta ọnụ abụọ tracks n'ime otu. The software na-agba na Windows 7 na 8 nakwa dị ka Windows XP na Vista ma akwadoghi Mac.
Uru: nwere otutu audio edezi atụmatụ.
Cons: incompatibility na Mac, bụzi ihe mgbe ochie interface. Rating: 3
Nke a software nwere ezi uche ego nke ọdịyo mmetụta ma ekwe onye ọrụ na-arụ ọrụ nanị otu ọdịyo faịlụ na oge. Nwere ike audio mweghachi ike ma enweghi ike ihuchalu N'ihi nke ngwa nke a ụfọdụ mmetụta egbochi ndị arụpụtaghị Sound forge. Ọ bụ naanị na dakọtara na Windows OS; Windows 7, 8, 8.1, XP (SP2 ma ọ bụ mgbe e mesịrị) na Vista (SP 2 ma ọ bụ mgbe e mesịrị).
Uru: Enye ohere ochie E (vinyl, cassette wdg) na-dere ma ghọọ dijitalụ mma.
Cons: Ọ dịghị multi-track edezi ike, ike ịnyagharịa interface, enweghị mmetụta ọnụọgụgụ. Rating: 3
> Resource> Music> Top 6 music track / artist nchịkọta akụkọ